HTC Otu M8 | Gam akporosis
Miguel Gaton | | HTC, Nyocha
N'afọ gara aga, HTC One bụ ekwentị kachasị mma dị ka ụlọ ọrụ pụrụ iche. N'ihi atụmatụ ya na ọdịdị ya dị egwu ma dị mma, ụlọ ọrụ Taiwanese pụtara dị ka onye mmeri doro anya. Ọ chọkwara iso ya kwughachi ihe o kwuru HTC One M8.
Ma ọ bụ na March 25 na Nnukwu onye Taiwan gosiputara onu ogugu ohuru ohuru, ngwaọrụ nke na emegharia na imewe ma O nwere nkọwa nke na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ọkwa kachasị elu na ụlọ ọrụ ahụ.
1 Otu imewe dị ka HTC One
2 5-anụ ọhịa ihuenyo na Full HD mkpebi
3 Qualcomm Snapdragon 801 maka HTC One M8
4 Duo Igwefoto na UltraPixel
5 KitKat na HTC Sense na HTC One M8
7 Osisi onyonyo
Otu imewe dị ka HTC One
Ọhụrụ HTC One M8 na-ekwusi ike nke onye bu ya ụzọ. N'ụzọ dị otú a, anyị na-ahụ ngwaọrụ ejiri ihe kachasị mma rụọ ya, nke nwere aluminom dị ka onye protagonist. Ọ bụ ezie na ọ dịgasị n’ihe gbasara imewe, ntakịrị karịa karịa onye bu ya ụzọ.
Dị ka HTC One, HTC One M8 dị ezigbo ụtọ na mmetụ ahụ, n'ihi ihe ya, ọ bụ ezie na ị ga-etinye ya, n'ihi na ọ na-amị amị ntakịrị.
N'agbanyeghị nha ihuenyo ahụ, nha na ịdị arọ nke HTC One M8 mere ka ngwaọrụ a bụrụ ekwentị dị mfe. Ma ọ bụ na ọ bụ naanị 146,36 mm dị elu, 70,6 ogologo na 9,35 mm n'obosara na, ya na 160 grams ibu ibu, mee ya ka ọ dị ntakịrị ọnụ
Ha na-egosipụtakwa ọzọ Ndị ọkà okwu BoomSound, nke mere ọzọ ka ngwaọrụ a bụrụ nhọrọ na-adọrọ mmasị maka ndị hụrụ egwu na ọdịnaya ọdịnaya. Ọzọkwa site na HTC ha na-ekwe anyị nkwa mmelite na ogo na ike nke l25% ma e jiri ya tụnyere nke gara aga.
Rịba ama na ụmụ okorobịa na HTC wepụrụ bọtịnụ igodo, nke ga-apụta ugbu a na usoro sistemụ. Ọhụrụ HTC One M8 ga-adị na agba atọ: isi awọ, ọla edo na ọla ọcha.
5-anụ ọhịa ihuenyo na Full HD mkpebi
Smartphone ọhụrụ a sitere na HTC na-abawanye ihuenyo ma e jiri ya tụnyere onye bu ya ụzọ. N'ụzọ dị otú a, ihe ọhụrụ HTC One M8 gbagwojuru ekele a 5 nke anụ ọhịa ahụ Super LCD 3 panel nke na-ekwusi mkpebi HD zuru ezu (1,920 × 1,080 pikselụ).
Ọ ga-agụnye nchebe a maara nke ọma Gorilla Glass 3 nke na-enye ihuenyo ngwaọrụ karịa nguzogide zuru oke.
Qualcomm Snapdragon 801 maka HTC One M8
N'okpuru mkpuchi nke ekwentị a, anyị na-ahụ ihe nhazi Qualcomm Snapdragon 801, ihe dị iche na-adọrọ mmasị banyere onye bu ya ụzọ, nke na-eti ekele na Snapdragon 600. N'ihi ekele ya anọ na 2.3GHz cores na 2GB nke ebe nchekwa RAM, ghara ịkọwa ya Adreno 330 GPU, ihe ọhụrụ HTC One M8 ga-arụ ọrụ dị ka silk. .
European version ga-enwe a 16GB n'ime ebe nchekwa, ọ bụ ezie na a ga-enwe ụdị ọzọ na nchekwa 32GB. Ọfụma na ndị otu Taiwan mụtara site na mmejọ ha na ọdụ ọhụrụ ahụ ga-enwe oghere kaadị SD, nke ga-eme ka ebe nchekwa gbasaa ruo 128GB.
N'ikpeazụ, anyị ga-ahụ batrị 2.600 mAh, ihe dị mma na-atụle arụmọrụ nke HTC One M8, ọ bụ ezie na ha na-ekwe anyị nkwa usoro nkwụ ụgwọ nke dị 75% ọsọ karịa nke ndị asọmpi ya. N'ihe banyere oghere SIM, na nke a ga-eji nano SIM.
Duo Igwefoto na UltraPixel
Onye na-emepụta Taoyuan na-akụ nzọ ọzọ na teknụzụ UltraPixel ya. Ke idaha enye emi Htc webatara a abụọ igwefoto, ana baptism dị ka Igwefoto Duo nke gunyere oghere mbu nke 4 megapixels nwere oghere di elu f / 2.0 na millimita 28.
Ọ bụ ezie na ọ bụ igwefoto abụọ, ebumnuche nke HTC abụghị iji weghara onyonyo na 3D kama ọ bụ iji meziwanye ogo ndị nwudoro, na-enye ohere ka atụ atụgharị uche mgbe ewerechara ogbugba ahụ.
Banyere igwefoto nke abụọ, ihe ọ na-eme bụ ịnakọta ozi gbasara omimi iji kwado njikwa nke foto. Anyị enweghị ike ichefu banyere raara onwe ya nye mgbawa HTC ImageChip 2, a processor dị nnọọ ka Sony's BionZ, nke na-enye gị ohere weghara foto ma jikwaa onyonyo ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi.
O gosiputara na ohuru HTC One M8 ga-enye ohere nnweta na 300 milliseconds, na mgbakwunye na ikwe ka ịdekọ vidiyo na nwayọ nwayọ n'oge. HTC maara na igwefoto dị n'ihu na-abawanye uru na ọ bụ ya mere o ji tinye oghere lens 5 megapixel nwere oghere nwere oghere sara mbara nke na-enye ohere ịdekọ vidiyo na usoro 1080p.
KitKat na HTC Sense na HTC One M8
Dị ka ọ dị na mbụ na HTC, ọ bụ ezie na HTC One M8 ọhụrụ ga-arụ ọrụ na Android 4.4.2 KitKat, ọ ga-eme ya n'okpuru akwa ya, na nke a HTC Sense 6.0. Ngwa ndị dị ka Blinkfeed, onye nchịkọta akụkọ ama ama nke ndị Taiwan buru ibu, ga-alaghachi, yana ọrụ ndị ọzọ dịka HTC Zoe ma ọ bụ Sense TV.
HTC ekwenyela na ọnụahịa na nnweta nke HTC One M8. N'ụzọ dị otú a, kpakpando ọhụrụ nke sitere na HTC ga-abata n'etiti Eprel na a ọnụahịa nke 729 euro.
Ogo nke rụchara
Boomsound na-ekwu okwu sterio
Igwefoto azụ abụọ
O nweghi nkwado maka kaadi micro SD
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » HTC One M8
Twitter maka gam akporo na-enye gị ohere itinye ndị ọrụ aka na foto ma bulite ọtụtụ n'otu oge na ụdị ọhụrụ ahụ
Otu esi emepụta listi mgbasa ozi ọhụụ na WhatsApp na gịnị ka ọ bụ maka?